Namichi 'Puutiin ajjeesuuf korate' ni madaa'e, haati warraa isaammoo Yukireen keessatti ajjeefamte - BBC News Afaan Oromoo
Namichi 'Puutiin ajjeesuuf korate' ni madaa'e, haati warraa isaammoo Yukireen keessatti ajjeefamte
Goodayyaa suuraa Amiinaa Okuyeey fi abbaan warraa ishee fedhiidhaan finciltoota degeertoota Ruusiyaa waliin lolaa turani.
Prezidaant Vlaadimiir Putiiniin ajjeesuuf korachuun kan yakkame namni Checheen wayita madaa'u, haati manaa isaa immoo naannoo Yukireen magaalaa guddittii Kiyev keessatti haleellaa konkolaataa isaaniirratti godhameen ajjeefamteetti.
Adaam Osmaayeey konkoolaataan inni keessa jiru raasaasaan rukutamuun ''kan madaa'e ta'ullee lubbuun ni jiraata,'' jedhu goorsaa Ministeera Dantaa biyya keessaa kan ta'an Antoon Heraashicheenkoo.
Itti dabaluunis, haati manaa Osmaayeey, Amiinaa Okuyeeyaa immoo haleellaa irratti banameen ganda Heeyaahaa jedhamuu keessatti duuteetti jechuun dubbataniiru..
Bara 2012 keessa, Obbo Osmaayeey gartuu Islaamuummaa leellisan waliin Pireezidaant Puutiiniin ajjeesuuf korachuun shakkamuu isaanii angaawwonni Raashiyaa dubbatanii turan.
Korattoonni kunis magaalaa Mooskoo keessa Daandii Kutuuzoovisky jedhamu fi kan Pireezidaant Puutiin guyya guyyaan irra darban irratti meeshaa dhuka'aa awwaaluuf akka saganteeffatan sab-qunnamtiin Raashiyaa wayita sana gabaasanii turan.
Kana booda Raashiyaan Obbo Osmaayeey dabarfamanii akka kenamaniif Yukireeniin gaafattus - angaawwoonni Kiyev dabarfamee akka hin laatamnef ol iyyannaa namni kun galfatee ilaalchisee manni murtii mirga mamoomaa Awuurooppaa hanga murtee kennutti eegna jechuun didaniiru.
Waxabajjii keessa yaalii ajjeechaa Kiyev keessatti irratti yaalame irraa yoo oolu, nama yaalii sana irratti godhe sana haati warraa isaa dhukkaasuun madeessitee turte.
Fedhii mataa isaniitiin looltuu Yukireen ta'uudhaan baha biyyatti keessatti finciltoota deggartoota Raashiyaa waliin erga lolanii booda, hadha warraafi abbaan warraa kun Yukireen keessatti namoota guddoo beekamani.
Haleellaa Wiixata darbee ilaalchisee hanga yoonaatti namnii itti gafatama fudhate hin jiru.
Haleellaan kunis kan raawwate konkoolaata irratti boombiidhaan balaa qaqqabeen namni bakka bu'aa mana marii Yukireen tokko madaa'ee torban tokko utuu hin guutiin ture.
Waardiyya Ihoor Mosiychuuk tokkoo fi namnii biraan tokkos dhohiinsa kanaan ajjeefamuun isaanii ni yaadatama.
Aadde Okuuyeevaan yeroo tokko nama kanaaf akka gorsiituutti hojjechaa turuun ishee ni beekama.
Wagoota dhihoo asitti Kiiv keessatti abootii siyaasaa bebeekamoo ta'aniif gazixeesitoonni ajjeefamaa turaniiru.